Muqdisho: Sagaal qof oo gaajo u dhimatay
Muqdisho: Sagaal qof oo gaajo u dhimatay Recommend
Photo | Kaydka Sawirrada/Ergo Radio Ergo 16 May, 2017 SOOMAALIYA Sagaal oo qof oo ay carruur ku jirto ayaa la sheegay in toddobaadki hore u dhinteen gaajo xero ku taallada degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Waxaa la sheegayaa in raashin bilsil oo maamulka degmad auu siin jiray oo hakad galay taasi oo sababtay dhimashada dadkan. Dadka dhintay waxay ka mid yihiin dadka ka soo barakacay abaaraha. Halkan ka dhegeyso warbixinta oo uu soo diray Munasar Maxmaed Cabdi. previous
Baydhabo: Khudaarta oo qaali noqotay
Shimbiro rajo beel ku riday beeraleyda Bay ee ka soo kabsan lahaa abaarta
Danyarta oo uu saameeyay shilin Soomaaligii hore oo laga diiday Gaalkacyo
Barakacayaasha iyo Qaxootiga (765)
Arrimaha Bulshada (654)
Caafimaadka & Waxbarashada (584)
Beeraha iyo Xoolaha (434)